Fiandohan'ny maraina | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Drafitra famakiana Baiboly Fihetsiketsehana maraina
Ry olo-malala Andriamanitra tsara, andao mba avereno fotsiny ny nolazain'Andriamanitra momba antsika androany maraina.
Ary izao no fanekeko amin'izy ireo, hoy Jehovah. “Ny Fanahiko tsy handao azy ireo ary tsy hahafoy ireo teny ireo izay nomeko anao. Ho eo amin'ny molotrao sy eo amin'ny molotry ny zanakao ary ny zanaky ny zanakao mandrakizay izy. Izaho Iaveh no niteny!
Iaveh no heriko sy hirako, ary izy no famonjena ahy; Izy no Andriamanitro, ka hidera azy aho, Andriamanitry ny raiko, ary hanandratra azy aho.
Eksodosy 15: 2
Enga anie ianao ka hiala avy any an-danitra ka hidina! Hihorohoro eo imasonao ny tendrombohitra! Tahaka ny afo mampirehitra ala sy mahandro ny rano, dia toy izany koa no hampihorohoro ny firenena. Avy eo ny fahavalonao dia hahafantatra ny anton'ny lazanao! Raha nidina taloha ianao dia nanao asa mahatalanjona mihoatra ny nandrasana ambony indrindra. Ary Endrey, ohozongozona ny tendrombohitra! Fa hatrizay hatrizay dia tsy mbola re ny sofina, ary tsy mbola nisy maso nahita Andriamanitra tahaka anao, izay miasa ho an'ireo miandry Azy! Raisinareo ireo izay faly manao soa, izay manaraka ny lalan'Andriamanitra…
Noho izany, mifampitondrà ianareo, dia ho torotoro tokoa ianareo. Mandrenesa, ry tany lavitra; misikìna, makà hevitra, fa tsy ho foana; lazao ny teny, fa tsy haharitra; fa momba ahy Andriamanitra. Isa. 8: 9-10
Vokatry ny fifanekena nataoko tamin'Andriamanitro, sy fiderana sy fiankohofan'Andriamanitro aho, hamaky ny tavany amiko mandrakariva ny tavany, hamindra fo amiko izy sy ny ahy. Hamiratra eo amin'ny lalako ny fahazavany ary hanodidina ahy ny androko rehetra amin'ny anaran'i Jesosy
Hatramin'izao, rehefa miantso ny anaran'i Jehovah aho, dia haninjitra ny tanany izy ary hanandratra ahy ho ambonin'ny fahavaloko rehetra sy ny asany at me amiko, ary manafaka ahy amin'ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izy
Indro, ny hery rehetra / olona / demony izay tezitra amiko dia ho menatra sy hangaihay; ho toy ny tsy misy izy ireo; ary ny hery sy ny olona miady amiko, dia ho very. Hotadiaviko izy ireo, fa tsy hahita azy ireo ny hery miady amiko sy amin'ny tenako. Izay miady amiko dia ho toy ny tsy hisy amin'ny anaran'i Jesosy
Amin'izao vanim-potoana izao sy mandrakizay dia tsy misy fitaovam-piadiana izay miady amiko, ary ny lela rehetra mitsangana hanameloka ahy dia efa voaheloka sahady, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny zanak'izay nampahory ahy dia hiankohoka amiko, ary izay rehetra nanamavo ahy dia handohalika eo an-tongotro, amin'ny anaran'i Jesosy.
Rehefa mahita ny ran'i Jesosy ny fahavalo dia handalo izany, tsy afaka miditra ao amin'ny tranoko ny mpamono noho ny ran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy.
Misaotra anao izahay Tompoko noho ny teninao izay tsy mahomby na oviana na oviana amin'ny famaliana ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy
Previous lahatsoratraTOROHEVITRA MANGORATRA: FANAOVANA NY TANY
Next lahatsoratraTonga amin'ny làlana ny fanampiana
Drafitra famakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 11 Novambra 2018
Ny herin'ny vavaka fitoniana amin'ny fiainantsika andavanandro.